Ukuqhuma Kwangaphakathi Kwezentengiso | Martech Zone
Ukuqhuma Kwangaphakathi Kokumaketha
NgoLwesihlanu, Mashi 23, 2012 NgoMsombuluko, Septemba 23, 2013 Douglas Karr
Njengendlela ejensi yezentengiso engenayo, sicabanga ukuthi kuyajabulisa ukuba ngabameli ohlangothini olungaphambili lwenguquko emangalisayo embonini ye-ejensi. Ukusuka kubathengisi kuya kubaklami, wonke umuntu unaka kakhulu isithombe esikhulu sokumaketha okuku-inthanethi kunokuthi asebenze kuma-silos noma ezindaweni zokududuza. Ukusebenza kumaphakathi kunikeza imiphumela emikhulu… kepha akulula!
Ukumaketha kwakujwayele ukukhokhela ukunaka kwezilaleli zakho nokuzama ukubayenga kude nanoma yini ababekwenza ngaphambilini. Kepha ngenxa yewebhu, umdlalo usushintshile. Ukumaketha okungenayo kufaka phakathi amaqhinga amaningi aheha amakhasimende ngokubanikeza imininingwane ewusizo, efanelekile. Usebenzisa ukumaketha okungenayo, ungangena kumakhasimende alangazelela ukuthenga okuthengisayo. Sihlola ukuthi ukumaketha kwangaphakathi kungene kangakanani nokuthi amabhizinisi athola kanjani impumelelo ngakho ngo-2012. Kusuka kubalobi be-G +, The Inbound Marketing Explosion.
Tags: ibhulogitraffic ngqomarketing kwangaphakathiamakhasi okufikaukuhola isizukulwaneukumaketha okungaphandleukusesha okukhokhelweseosocial media
I-CMO yethula Umhlahlandlela Osebenzisanayo Wendawo Yomphakathi
Ilogo Yemibala Yewebhu
Mar 23, 2012 ku-10: 43 PM
Ukuthi umngani wami ukhombisa ukuphela kwenkathi kanye nempahla ephambili yomunye. Imithombo yezokuxhumana iyigama eliyinkimbinkimbi… akumangalisi ukuthi izinkampani zigcwele kuyo njengezilwandle zasolwandle eziya kumasamishi.
Ngicabanga ukuthi njengoba iwebhu yezenhlalo ikhula noma kunjalo, sizobona ukuvela kwebhizinisi futhi. Ukuze usebenze kule nkundla entsha yezenhlalo, kufanele ube nomphakathi. Futhi amabhizinisi awajwayele ukuba nezenhlalo… kuyethusa kubo. Kuzofanele bafunde ukuba njalo noma bazokufa. Plain futhi elula.
Mar 28, 2012 ku-10: 17 AM
Abathengi abafuni ukuzizwa sengathi bathengiswa kubo. Ukumaketha okungenayo kumayelana nokujoyina ingxoxo, esikhundleni sokuyiqala. Abathengi abanesidingo bazozama ukuthola isisombululo. Ukusebenza kwezentengiso ezingenayo kuthuthukisa amathuba wokuthi uzoba yisixazululo.
Mar 28, 2012 ku-10: 35 AM
Maphakathi naleli shadi - ngabe amalebula awalungile? Okuphumayo kungaphansi, Okungenayo kungaphezulu?
Mar 28, 2012 ku-5: 32 PM
Mina ngicabanga ukuthi uqinisile! @freighter sikuqaphele ngokushesha nje lapho sikuthumela (whew… asiyiklamanga leyo!).